Caslex Casademunt achagamuchira mutero pamwe nevamwe vake neshamwari | Bezzia
Susana godoy | 11/05/2021 14:00 | Nhau, Zviitiko
Nhau dzinosuruvarisa dze kufa kwaAlex Casademunt kwakatonhora munhu wese. Zvisingatarisirwi uye zvinosuruvarisa, shamwari dzake dzaivepo kuti dzimupe pekupedzisira. Kunyangwe pamwe yaive yekupedzisira nekuti ikozvino kunouya mutero wemanzwiro neaimbove vaaishanda navo kubva ku 'Operación Triunfo' nevamwe vazhinji.
Ikonisheni inovavarira kuve imwe yenguva dzakakosha kwazvo dzegore uye ndangariro isingadzimiki. Naizvozvo, kana iwe uchifarira kuve chikamu chayo, une zvakawanda ruzivo kuti uzive. Nyora pasi mudhayari rako kuti pasave nechimwe chingakanganwa zviri kuuya!
1 Chizvarwa chekutanga cheOperación Triunfo chinopinda zvakare
2 Ndeapi maartist achave aripo pamutero kuna Álex Casademunt
3 Ndiani achatora chiitiko ichi
4 Zvichaitikira kupi uye riinhi
Chizvarwa chekutanga cheOperación Triunfo chinopinda zvakare
Ivo vaive chizvarwa chekutanga uye izvo zvinogara zvichitaridza hupenyu hwavo. Nekuti vese vakazviratidza nehope dzaizotaridzika munyika yezvemimhanzi, kuve nenziyo dzavo, mabasa avo ehunyanzvi uye ndizvo zvave kuitika kune vese. Asi kwete chete mundima yehunyanzvi ivo vakamira kunze asiwo nevashandi vavakabatana navo muhukama hukuru hwakagara mukati memakore ese. Neichi chikonzero, ivo havana kuzeza kutaura kuonekana naAlex Casademunt uye ikozvino, vachazviita zvakare.
Kusavapo kukuru? Chokwadi ndechekuti hazvisati zvazivikanwa kuti kuchave nekusipo here kana kwete. Nekuti isu tatoziva kuti mhando yechiitiko ichi inogona kutishamisa paminiti yekupedzisira. Asi kwechinguvana Zvinonzi Rosa naDavid Bisbal havapinde, asi naGisela haazoendi. Wekupedzisira akazivisa kuti aive nezvimwe zvipikirwa zvehunyanzvi uye kuti zvaisaita kuti avepo. Nepo vamwe vake vaviri vaine zvimwe zvisungo uye zvinoita sekunge isu hatizovaona padariro. Asi pavakabvunzwa nezvaAlex, ivo vane chete mazwi akanaka ekutsanangura hushamwari uhwo hwakavaratidza hupenyu.
Ndeapi maartist achave aripo pamutero kuna Álex Casademunt
Pasina kupokana, David Bustamante aisakwanisa kupotsa musangano. Alex anga akaita sehama kwaari, kunyangwe hazvo iwo mapepanhau akataura kuti mumwaka wadarika vaive kure kure. Asi hapana chimwe chinowedzera kubva pachokwadi semuimbi akataura mune yake yekupedzisira bvunzurudzo. Muchokwadi, vaive nehurongwa hwehunyanzvi pamwechete, izvo zvaisagona kuitiswa nekuda kwekufa kwaAlex kamwe kamwe. Pamusoro peBustamante, achaperekedzwa naChenoa pamwe naNuria Fergó naManu Tenorio. Vaaimboshanda navo kubva ku 'Open Fomula', Geno, Javián naMireia vachatora danho zvakare.
Kune rimwe divi, hatigone kukanganwa Alejandro Parreño, Verónica Romero kana Naim naNatalia. Kunze kweavo vese shamwari, nevamwewo mazita kubva munharaunda yenyika anonzwika zvine simba kumutero wakadai saMarta Sánchez kana Merche, pamwe naPancho Céspedes naRosal. Pasina kukanganwa kuti mukoma waAlex Casademunt, Joan, achave aripowo. Pamwe chete ivo vakanyora rwiyo rwakabuda mazuva mashoma apfuura.
Ndiani achatora chiitiko ichi
Chiitiko chese cherudzi urwu chine muparidzi wacho. Nzira yekugadzira yakanakisa sumo yenziyo uye maartist mune zvese. Asi mune iyi kesi, iwe waifanirwa kutsvaga tenzi wemhemberero uyo aive zvakare akabatanidzwa zvizere nemweya. Saka achave Nina, aimbova director weacademy yeOperation Triumph, uyo akashandawo padivi nedivi navo vese. Pasina kukanganwa kuti iye zvakare mumwe wemazwi makuru pane yechiSpanish chiitiko.
Zvichaitikira kupi uye riinhi
Chiitiko ichi chichava paWiZink CEnter muMadrid uye zuva racho richava Chikunguru 24. Unotova nematikiti ekutengesa uye mitengo yacho inosiyana, nekuti inotanga kubva pa45 euros kusvika kungopfuura 70. Iyo konzati inonzi 'Mumwe mukana' nekuti inoreva rwiyo rwakanyorwa naAlex Casademunt nemukoma wake. Pamusoro pezvo, panguva yakaita seiyi zvinouya zvinobatsira kubhadhara mutero wakamirirwa kwenguva refu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Caslex Casademunt anogamuchira yake inotarisirwa mutero